Job vacancies from RMA Myanmar
RMA Group ,headquartered in Bangkok, Thailand, isaglobal company which employs over 8000 people and has an operational presence in over 22 countries.RMA provides customer-driven, tailored solutions in automotive, infrastructure, engineering, financial services, and food service sectors for customers in emerging markets through to fully developed markets. For over 25 years, RMA has provided unequalled service in these areas, bringing innovation, integrity and enduring partnerships to support the needs of its clients worldwide. We are now creating great opportunities for professional excellence to candidates in many functions such as Finance, Accounting, Sales, Operations, Human Resource etc. To learn more about RMA Group, please visit us at www.rmagroup.net Bankok မြို့ ထိုင်းနိုင်ငံ အခြေစိုက် RMA Group ကုမ္ပဏီသည် ၀န်ထမ်းပေါင်း ၈၀၀၀ ကျော်ရှိသည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံပေါင်း ၂၂ နိုင်ငံကျော်တွင် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးတိုးတက်စေရန် မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရောင်းဝယ်ရေး၊ နိုင်ငံ၏ အခြေခံအဆောက်အဦး၊ အင်ဂျင်နီယာလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှု၊ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းများတွင် Customerများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီသော ၀န်ဆောင်မှုများဖြင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးသည်။ RMA သည် နှစ်ပေါင်း ၂၅ နှစ်ကျော် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ clientsများ၏ လိုအပ်ချက်များကို နှစ်ရှည်ပူးပေါင်လက်တွဲကာ စ်ိတ်စေတနာအရင်းခံ၍ ဆန်းသစ်မှုများဖြင့် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေသော လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ Finance, Accounting, Sales, Operations, Human Resources အစရှိသော လုပ်ငန်းနယ်ပယ်အသီးသီးရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းကောင်းများကို ဖန်တီးပေးနေပါသည်။ စိတ်ဝင်စားသူများသည် www.rmagroup.net တွင် ၀င်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။